ISPO Munich Jan.26 ukuya Jan.29, 2020, Wamkelekile kwi umnquba yethu C6.431-6
Inkxaso Back & Intamo
Yoga Iibhloko & straps
Yoga & SOCKS umntu, Bags & Abanye
UMZIMBA & NOKULUNGELA
Nje Intshayelelo eqela
khangela Thina iqela lethu R & D nje, ukuba amandla ethu asakhasayo, sisoloko sibeke 10% yenzuzo umnatha R & D, sijonge kwimarike nokuhlalutya intsingiselo kwimarike, ethi ivelisa kakhulu umbono, siye sithathe ezinye ukuba anxibelelane nabathengi bethu professional emhlabeni Umhlaba. Abanye mbono ekuvunyelwene uya kuba isazobe yoyilo, ukunxibelelana kwakhona kwaye kwakhona ......, ekugqibeleni umzobo into eyenziwe R yethu & Iqela D, The elilandelayo kukuba ukwenza isampuli lokugqibela, Emva koko siye isitephu- "ukuvelisa" elandelayo
Thina mveliso zethu apho ukwenziwa Hula Hoop, Intamo Emva inkxaso Products, kasi Iimveliso kunye Meditation Products e Ningbo, Xa sithe safumana-odolo ezivela kubathengi bethu, bethu umntu intengiso ziya reconfirm zonke iinkcukacha kunye nabathengi bethu. Emva koko, kwifektri uya kwenza iisampulu Pre-Imveliso mveliso iya kuqalisa imveliso mass xa iisampulu PP iqinisekisiwe. mveliso ze impahla siwa kwinkqubo yolawulo ISO9001 umgangatho 2008, Ukuze ufumane iinkcukacha ezingakumbi malunga kolawulo lwethu umgangatho, Hamba inyathelo elilandelayo - "nolawulo lomgangatho"
inkqubo yolawulo lomgangatho sabela zethu 3 parts- izinto yolawulo lomgangatho (zihlolwe ngaphambi kokuya yempahla yethu eziphathekayo okanye phambi kokuba imveliso), ulawulo olusemgangathweni ngexesha ngobuninzi kunye nokuhlola umgangatho emva imveliso. ulawulo yethu mfanelo inobutshijolo ngomhla ISO9001 kwinkqubo yolawulo lomgangatho, Isampuli uhlolo ngokwe AQL (ukwamkelwa Quality Limit) 2.5 nemigangatho. Yethu QC iya kwenza iingxelo zohlolo ngolandelelwaniso nganye. Emva kokuba abathengi kokuhlola iingxelo zohlolo kwaye yaqinisekisa, Siya vaka sempahla.
Marketing kunye Sales
Yokumaketha kukuba ukufumana 'kwiimfuno zokwenene kunye ukufumana imveliso ezithandwayo emarikeni kubathengi bethu, iqela lethu intengiso kunye neqela R & D zisoloko zisebenza kunye ukwenza iimveliso ezintsha ukuhlangabezana kubaxumi yokugqibela' abaxhasi zokugqibela iimfuno. Yethu umntu ukuthengiswa ziya kusoloko kulandela uluvo ezintsha kunye nemveliso evela kwiqela lethu zokuthengisa kunye neqela R & D bayiqhube iimveliso ezintsha iimveliso ezithandwayo kubathengi bethu, Sijolise sobuchwepheshe kunye nenkonzo nomoya, njengoko usebenzisa ulwimi lwenkobe ukukhonza abathengi bethu . Sicinga ukuba unxibelelwano oluhle sisiqingatha yimpumelelo.
khangela sonke unikezelo njengendawo yokuqala komyalelo entsha. Emva kokuba impahla athumela ngaphandle, Siya ukulungiselela onke amaxwebhu ukulungiselela abathengi ukuba pick up iimpahla kakuhle, Ukunceda abathengi indlela ukukhetha up iimpahla xa kuyimfuneko. Siya kuthumela i "ifomu eyanelisayo" zabaxhamli emva kweentsuku ezimbalwa. Sijonge "Abathengi kuqala, umoya emvumelwano kunye ikhredithi kuqala" njengoko imigaqo bethu base nokulingana Mutual, intlonelo Mutual kunye nokuzuza macala omabini.
A Intshayelelo olufutshane brand
I brand "NEH" yakhiwa ngo-2005, lo mgaqo ukwakha le brand "NEH" inobutshijolo kwi yeNdalo (Organic), Eco banobuhlobo lezeMpilo. I brand "NEH" ithatha unobumba wokuqala Natural, Eco banobuhlobo lezeMpilo. F. ukuba bayile kwaye ukwenza Natural, Eco Friendly kunye neemveliso zempilo ukwenzela abaxumi bethu.
I brand "SCMO" kwakhona igama lenkampani, ladalwa ngokutsho China ifilosofi "Theory of zintlanu izinto" yaye "Fengshui", SCMO ngesiTshayina yi "Ji Mu", Igama elithi "Ji" ngesiTshayina na ukuba akwazi ukuya kuyo yonke indawo ehlabathini ebufundisini, yaye sithunywe ukuba uncedo wonke umntu ngakumbi sempilweni, igama elithi "Mu" ngesiTshayina kukuba sifanele sibe sisebenza nzima yaye knowhow suku ngalunye, ke SCMO (Xunmu) kukuba sifanele sibe sisebenza nzima yaye knowhow suku ngalunye ukunceda wonke umzimba ngakumbi obusempilweni.
Ngophuhliso zobugcisa inzululwazi, Ihlabathi waba emibala ngakumbi intsimi eziphathekayo kunangaphambili, Izinto zatshintsha kwiinkalo ezininzi, abaninzi abantu baye got ezininzi iinzuzo evela kwicala emzimbeni, Noko ke, Kuyinto ukungalingani phakathi kwicala ngokwasemzimbeni kunye nengqondo & umphefumlo emacaleni. I brand BESELF yayakhelwe lokuyila nokuphuhlisa iimveliso ezihambelana uncedo abantu ukuze ufumane uzinzo phakathi kwicala ngokwasemzimbeni kunye nengqondo & namacala umphefumlo.
INKXASO Magic BACK
Ngophuhliso IT, Nguwuphi batshintsha inkoliso ngembeko zokusebenza abantu ukuba bahlale kuba time.A elide ixesha elide kokuhlala uzisa ingxaki nangxowa ngomqolo yethu, Sidla zintlungu emva eliphantsi kunye nobuhlungu entanyeni, Lo ndinentlungu engapheliyo ezisongela ubomi bethu ngcono, siya ubunikele uncedo abantu ukuphucula iimeko zabo, lowo isizathu brand "inkxaso umlingo umva" kwakhiwa 2011.Now brand "nkxaso umlingo" ebhaliswe ku China, US kanye EU
Le mbono "friendly Eco" le migaqo yethu ukuyila iimveliso nokwenza iimveliso nokwakha bands zethu. Ngo-2010, Kwakukho iipilisi ukudla leyo yaba nefuthe emibi. Sabona kukho ithuba elihle kakhulu ukuba amsunduze ihula-hupula yethu detachable, Abantu njalo wathi "ubunzima Ungalahlekelwa, Sebenzisa Hoop ihula", siye nje niyifincile into kulo; Ngoko ke wakha brand "Ubunzima Hoop" ukuze ihula-hupula yethu manje iringi ubunzima abhaliswe China, US kanye EU
A Intshayelelo emfutshane iqela lethu
Uphando noPhuhliso sibheka iqela lethu R & D nje, ukuba amandla ethu asafufuzayo, njalo-10% yenzuzo umnatha R & D, Thina nondele kwimarike nokuhlalutya intsingiselo emarikeni, Yeyiphi ivelisa kakhulu umbono, Sikhetha up ezinye ukuba anxibelelane nabathengi yobungcali emhlabeni world.Some kuvunyelwene umbono uya kuba isazobe yoyilo, ukunxibelelana kwakhona kwaye kwakhona ......, ekugqibeleni umzobo into eyenziwe R yethu & iqela D, the elilandelayo kukuba ukwenza isampuli lokugqibela, Emva koko siye isitephu- elilandelayo "ukuvelisa"
Thina mveliso zethu apho ukwenziwa Hula Hoop, Intamo Buyela Umva Products inkxaso, kasi Iimveliso kunye Meditation Products e Ningbo, Xa sithe safumana-odolo ezivela kubathengi bethu, bethu umntu intengiso ziya reconfirm zonke iinkcukacha kunye nabathengi bethu, Emva koko, kwifektri ngeke ukwenza Pre-imveliso iisampulu mveliso iya kuqalisa imveliso mass xa iisampulu PP iqinisekisiwe. mveliso ze impahla siwa kwinkqubo yolawulo ISO9001 umgangatho 2008, Ukuze ufumane iinkcukacha ezingakumbi malunga kolawulo lwethu umgangatho, Hamba inyathelo elilandelayo - "nolawulo lomgangatho"
Yintoni iimveliso & iimarike bakho abaphambili?
iimveliso zethu ezona ihula-hupula, Ukucofa ngeminwe mat, izixhobo unyango empontshwa nokucamngca umqamelo. Thina years-10 yamava imveliso elizweni ezi mveliso. iimveliso zethu kunye neenkonzo ngokuthi iinkonzo ukusuka eYurophu, North America, iOceania kunye noMzantsi Korea, ngubani becala ke abaphathi ivenkile, ukuthenga yobungcali qethe kunye nempilo intsimi, kunye oonovenkile Amazon.
Yintoni na ubuncinane umlinganiselo ukuba ingayalela?
MOQ kuxhomekeke koko iimveliso ukuba nomdla. Ngokwesiqhelo, 50-100pcs / umbala nganye iimveliso zethu eziphambili olusebenzisekayo, ukuba iinkcukacha zakho ulwenziwo Akukho nzima. Siya kuzama konke okusemandleni ethu ukuxhasa abaxumi bethu ukuba iinzuzo efanayo.
Yintoni uhlobo zokufaka na idini & Ngaba thina yenza?
zokubopha mgangatho ileyibheli + yemiyalezo + ibhokisi yemibala (okanye ibhokisi mail) + ibhokisi ibhokisi. Isenokuba enye esekelwe kwiimfuno zakho. mqambi yethu oqeqeshiweyo uya kunikela iinketho ezininzi kunye neengcinga ezintsha malunga ukuphakheja.
Ngaba unikeze ikhathalogu zonke iimveliso zenu?
Ewe. Thina zamakhulu iimveliso eziphambili ngokwahlukeneyo. Ndiyavuya ukuba akuthumele zeekhathalogu kwi PDF okanye umfanekiso ifomathi nge e-mail okanye apps zentlalo.
Ngaba unganika yesikhokelo zokusebenzisa le mveliso?
Ewe. Sinako abanikela ncwadi instrucion ngolwazi umsebenzi wayo, ukusetyenziswa, kwaye ukwenza kunye kweqela zonke iimveliso zethu.
Ngaba yintoni na isiko okanye eminye imibala wena?
Ewe. Thina eminye imibala linokunyulwa kwaye ikubonise iinketho. Kwakhona ngemfuneko umbala entsha kuwe. xelela nje thina inombolo Pantone okanye usithumelele isampuli umbala.
Yintoni na iindleko isampula?
Ndiyavuya ukunika omnye wesampula ezamahala rhoqo ngoxa kufuneka uhlawulele eJozi kunye iisampuli ezongezelelweyo. ziya kwenziwe intlawulo eyongezelelweyo ebizwayo ukuba isampuli elicwangcisiweyo ngenxa ukuba kufuneka senze ibhodi uhlobo kushicilelwa. Unako ukuhlawula nge PayPal okanye AliPay Chinese kuphela kunye WeChatPay. Njengoko ixesha delivery, nceda ufumane iphepha ngezantsi.
indawo Shipping ixesha Delivery ngu express
amantla Emelika 2 ~ 3days
Sijonge ukuba GOTS eqinisekisiweyo ukucamngca ababetheki kakhulu, na oko?
Ewe. ababetheki yethu Ukucamngca wadlula isiqinisekiso GOTS. Zonke iimveliso zethu zenziwe izinto ubuthi. Kuba bonke ulwazi iziqinisekiso nceda ukufumana iphepha ngezantsi.
ulwazi certification ogunyazisiweyo patent
efektri yethu GOTS, BSCI, ISO9000
iimveliso zethu ihula-hupula CE, ZAMA, ROHS, AZO, EN71,6P Ewe
-cofa mat CE, ROHS, EN957, FIKELELA Ewe
nkxaso magic CE Ewe
ukucamngca kwabadla ROHS, EN71, GOTS
lixesha imveliso kunye nexesha lokuthumela ukuze nganye ixesha elide kangakanani?
Siye ubuyekeze umgca yethu oluzenzekelayo imveliso ye ihula-hupula kunye -cofa mat leyo kakhulu shortens ixesha imveliso iintsuku 15 omnye 40HQ isikhongozeli. Kuba nezinye iimveliso ixesha standard imveliso yipeyinti malunga neentsuku ezingama-20.
port Destination ixesha Ukusiwa elwandle
amantla Emelika 30 ~ 50days
Yintoni na igama lakho?
ixesha lethu intlawulo yinto T / T-30% nje dipozithi, 70% xa kuthelekiswa B / ikopi L.
Ngaba ukunika nayiphi na inkonzo?
Thina professional yaye uyakuthanda iqela iifoto kunye photostudio enkulu kunye Equipments eliphezulu esiza ukunika iinkonzo ezixhasa ngathi isisombululo eliphezulu ntengiso ifoto, imodeli ifoto kunye nevidiyo kubaxumi.
Iinkcukacha us malunga ishishini okanye imveliso iyilwe ngokukodwa kuwe! qhagamshelana nathi
NEH (Ningbo) INDUSTRY & NEEMANYANO CO., LTD.
OFISI: 1502, Ningshing Building, 666 Jiangnan RD, District Yinzhou, Ningbo, China
Support Back Magic